Semalt: I-SEO-Inomdla Okuqukethwe Okuya kwenza i-Google Panda Ukuthande!
Ukuba usanda kulungiswa iqonga kwaye ufuna ukushicilela into ethile, qaphela ukuba umgangatho ophezulu kunye nephutha elingenanto iyakwandisa ukuthembeka kwakho kwi-intanethi. Uya kuvelisa amaninzi kwezithuthi kwiimidiya zentlalo kunye neGoogle ukuba umxholo wakho ufikelela kumakethi.
uJack Miller, uSemalt uMphathi oyiNtloko kuMpumelelo weMathengi, ukholelwa ukuba umgangatho wekhontrakthi yindawo ebalulekileyo ekujoliswe kuyo ukuba ufuna ukuphepha izigwegwe ze-Google Panda kunye nokukhulelwa. Ngenxa yokuba i-Panda iyimfuneko yenxalenye ye-Google's rating algorithm ngo-2017.
Kunyanzelekile ukuba ugxininise kubasebenzisi xa kuziwa kumxholo kunye nokuthengiswa kweendaba zoluntu. Umgca wokuba abantu bazama ukushicilela nokukhuthaza umgangatho ophantsi kwekhwalithi, kodwa kufuneka ugxininise ekushicileleni i-top-notch namanqaku athile - umzugsunternehmen kostenlose. Kule nkalo, bonke abaphathi bewebhu kunye neeblogi zimele ziqonde ezinye iinkalo ezibalulekileyo malunga nendlela yokwanelisa iimfuneko zeemfuno zewebhu, kuba umnyango wokuphumelela ungavulwa kuphela xa bengayithobeli umgangatho wemxholo.
Ukubhala umxholo we-SEO-friendly kuye kwaba yimfuneko kule mihla, kwaye umbhalo wephepha lakho lewebhu kufuneka ulungiswe ngokusebenzisa amagama angundoqo kunye namagama.
Unjani umbhalo obhaliweyo ukuba sibhale?
Kufuneka ubeke iifayile ezifanelekileyo kumaphepha okwinqanaba elingcono kwi
UJohn Mueller waseGoogle uthi akukho ncinane ubunani begama kunye nokugxilwa kwababhali bezinto kufuneka babe ngobunjani kunokuba buninzi.
Zingaphi Amagama Angakghona Ukulungisa?
Kuxhomekeka kwizinto ezimbalwa, umzekelo, kufuneka ubeke ingqalelo kwiMigomo yeNtloko yephepha lakho. Qinisekisa ukuba akukho kopi kwaye unamathisele, kwaye umxholo ufikelela kwimigangatho yeGoogle. Kule meko, kuya kuba lula kuwe ukuba ukwandise umxholo.
Gwema igama elingundoqo lokugxotha:
Ukugxilwa kwegama elingundoqo kukunye neGoogle kunye nezinye izikhokelo zekhompyutha! Esikhundleni sokugxotha amanqaku amaninzi kunye namaqhosha, kufuneka uhlawule ngokugqithiseleyo ukubonelela ngokuchanekileyo kunye nomxholo womgangatho. Ukugxilongwa kwegama eliphambili yinkqubo yokuphinda igama elifanayo elingundoqo okanye ibinzana ngokuphindaphindiweyo kumxholo wakho. Kucatshangelwa njengendlela ye-SEO ye-black hat kunye nokuchasene nemimiselo nemigaqo ye-Google.
Isibonakaliso sokuqala "samava omsebenzisi" kufuneka usebenze kunye nomxholo ophezulu kunye nokusetyenziswa okuncinci kwamagama angundoqo. Kufuneka uxelele umxholo wakho kwisiza sakho, uqinisekise ukuba umgangatho awunakulungelelaniswa nayiphi na indleko njengoko kukunceda usinde kwimiphumo yeGoogle.